December 28, 2018 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,Oromo [LANGAUGE]
Dhimma: Nageenyaafi xumura gadadoo saba keenyaa (xalayaa Banaa.)
Akkuma hundi keenya beeknutti loltoonni Agaaziifi humna addaa Poolisii Somaalee labsii muddamaafi atattamaa mootummaan waggaa darbe labse dawoo godhatee lubbuu uummmata keenyaa kumootaan ajjeesee, ajjeesiaas jira. Kan hawaasni Addunyaa quba hinqabaanne bara 2017 qofatti Lixaafi Baha Oromiyaarraa uummata keenya Miliyyona tokkoo ol ta’utu buqqaafameera; gariinis ajjeefameera. Bifuma walfakkaatuun, dubartoonni, daa’immaniifi dhiiroonni kuma dhibbaafi shantamaa ol ta’an bara 2017’tti naannoo Somaalee qofaarraa humnaan buqqaafamaniiru. Namootiin humnaan buqqaafaman kunneenis gumaacha uummtichaafi mootummaatiin ona Oromiyaalee garaagaraa keessa qubachiifamanillee beelaafi dhukkubaaf saaxilamanii lubbuun isanii kan darbe lakkoofsaan hedduudha. Ji’oota Fulbaanaafi Onkoloolessaa bara 2017 keessa siqiqiifi hammeenya isaanirra ga’e kanaaf uummanni buqqa’an kunneen yeroo fincilaa turanittis duguuggaan sanyii yeroo lamaaf iddoo qubbannaa isaanii kan yeroo Hamareessaa jedhamu keessatti akka irratti raawwatame ifa galaadha.
Jalqaba bara 2018, humni poolisii addaa Somaalee onaalee Bahaafi Kibba Oromiyaa kan akka Cinaaqsan, Gursum, Baabbileefi Lixa Harargee Bardoodee, Moyaaleefi Boorana deddeebi’uutiin rukutaa tureera. Bitootessa bara 2018 uummanni nagaan lakkoofsaan 30 ol ta’an xinnaa hanga guddaatti loltoota labsii muddamaa yeroo sanaatiin galaafatamaniiru. Balaa kanarraan kan ka’e uummanni 60,000 ol ta’an lubbuu oolfannaadhaaf lafa jireenya isaanii Moyaaleerraa Keenyaatti godaananiiru. Ajajaan waraanaa sababii buqqaatii, baqaafi dararaa uummata keenya 60,000 ta’e sun yeroo ammaa kanallee Moyaalee keessaa aangoorra akka jiru balaa suukkaneessaan dhiyeenya kana Moyaaleetti sabicharratti taasifame nuuf dhugoomsa. Eebila 15, 2018 humni hidhataan poolisii addaa dhiha Harargee Magaalaa Roggeetti daa’imman, dubartootaafi dhiirota 42 ajjeesee kumootaan buqqifamaniiru. Weerara sanaan walqabatee humnootiin poolisii addaa sun KM 200 irra kan caalu daangaa Oromiyaa keessa seenanii alaabaa mataa ofii dhaabbachhuun uummata shororkeessanii ajjeesuun dhiichisaa turaniiru.
Fulbaana darbe bara 2018 keessa waraanni hamaan Lixa Oromiyaarratti banamuun nibeekama. Qabata balaa sanaatiinis uummanni keenya 220,000 ol ta’an naannoo Benishangul Gumuz irraabuqqaafamaniiru. Gariinis ajjeefamaniiru. Namootiin shira hamaan buqqaafaman kunneenis beelaan, mana jireenyaa dhabuun, dhukkuba garaagaraan dararamuun hanga ammaatti kan siqiiqiifi gidira argaa jiraniifi gargaarsa gahaa mootummaa Naannoo Oromiyaafi Federaalaarraa kan hin arganne ta’uun nibeekama. Yeroo ammaa kanatti jeeqama jiru kanarraa kan ka’e keessumaa Wallagga bal’oo hedduu keessaatti manneen barnootaa guutummaatti waan dhaabbateef barattoonni jeeqama hamaa keessa galfamaniiru. Hojiin daldalaafi misoomaas gufateera. Duumessi hiyyumaa saba keenyarra golboobeera. Gochi akkasii kun ammoo kan dhaloota quucarsuufi egeree biyyatti gara yaaddoo hammaataatti aggaamsisudha.
Asfaw Beyene, Professor of Mechanical Engineering, San Diego State University, San Diego,
Karaa https://www.facebook.com/PMOEthiopia/ messenger fi oromiapo@gmail.com ergame.
Your Excellency Dr. Lema Megersa President of the Oromia Regional State Finfinne (Addis Ababa)
We recall that Agazi and the Somali Liyu Police conducted a very destructive war against the Oromo behind the cover of “the state of Emergency”, which resulted in the death of thousands of people. While the wider world was unaware that more than a million Oromo nationals were deliberately displaced from the border areas of eastern and southern Oromia during the 2017 calendar year. What is more, almost over a hundred fifty thousand Oromo women, children and men have been forcibly removed from their homes in the Somali Regional State alone, during and since September 2017. The displaced people were settled in different camps where they were exposed to hunger and diseases. In some cases, when they protested about their conditions, they were massacred as it happened twice in Hamarssa in September and October 2017.
Sent via https://www.facebook.com/PMOEthiopia/ messenger and to oromiapo@gmail.com